Ogaden News Agency (ONA) – Waa Guri aan lahayn albaab laga baxo
Waa Guri aan lahayn albaab laga baxo
Posted by ONA Admin	/ May 4, 2013
Waxaan weydiinay Faysal C/wali oo ka mid ahaa saraakiisha ka soo goostay maxaysatada Hawaarinta oo hadda ku sugan mid ka mid ah dalalka dariska ah sababta ay u baxsanayaan ciidankii uu ka tirsanaa. Wuxuu noo soo qoray jawaab waafi ah isagoo ka xogwaramay habka ciidankaa loo ciidameeyo iyo calaaqaadka ka dhexeeya iyaga iyo bulshada ama iyaga dhexdooda. Wuxuuna ku bilaabay;
Run ahaantii liyuu polisku waa guri aan lahayn albaab lag baxo isla markaas shaqsiga noqda liyuu police waxaa ku xidhma gurigaas. Askarigu waxaa uu noqdaa mid ku jira xabsi. 7badii regmanti ee ugu horeeyey oo iyagu si fahan daro ah u qortay liyuu police iyadoo ay dhalinyaradu aminsanaayeen inuu cidankani yahay nooc kamida police-ka kadibna xaaladoodii shaqo is bedashay oo ay noqotay mid ka adag tii milatariga taasoo dhalisay inay dhalinyaradii dib u gurasho ka sameeyaan in ay qortaan oy noqdaan ciidanka liyuupoliceka. Kadib xafiska nabadgalyada DDS waxaa uu go aansaday oo uu diyaariyey qorshe lagu ciidameeyo dhalinta waxaana xiligaas ahaa hogaanka nabadgalyada Cabdi Max,ud Cumar (Cabdi ilay) qorshahaa oo ahaa in lagu qasbo oday dhaqameedyadu inay kenaan dhaliyaro la cidameeyo isla markaasna degmo kasta loo qoondeyo tiro dhalinyaro ahoo laga keeno qabiilada loona diro oday dhaqameedyada. Waxay xukumadu qasabtay in degmo kasta iyo tuulo kasta ay keento tiro dhalinyara ah. Waxaa garab socotay straaategiyad ay wateen masuuliyinta cidanka oo uu u soo dhibay Cabdi ilay oo ahayd in dhalinyarada magaalada iyo ardaydaba lagu qasbo inay noqdaan liyuplce ama maleesiyada tadaaqiga.
Kadib marka odayaal dhaqanmeedyadu soo ururiyaan dhalinyarada oo ay u keenaan gudoomiyaha degmada waxaa lagu xareeyaa xerada ciidanka isla markaaba waaxa laga dhigaa liyuupolice, wiilkii diida ama ka fakada inuu noqdo ciidankana waxaa dib u raadiya oo raad qaada ciidan reerkiisa ah. Midkii la soo qabto waxaa gacanta loo galiyaa dakano oo waxaa lagu qasbaa inuu dhiig faraha la galo oo uu dilo qof lagu soo eedeedeyey ururka ONLF-ta oo u xidhnaa taasoo uu naftiisa ku furto, waxaa uuna sidaa ku noqdaa nin aan ka dhexbixin karin liyuu police-ka kana cabisi qaba dhamaan umadiisa oo sidaa uu ku dilo qofkasta. Ka dib wuxuu ninkaa dhalinyarada ah ee liyuu-police-ka lagu qasbay cuqdad u qadaa eheladiisii keenay xerada ee soo qabtay, waxaana imanaysa ugu dambaynta inuu si naxariisdaro ah u shaqeeyo oo qofkasta uu gumaado, dilkana caadaysto. Tabahani waa tabaha lagu ciidameeyo dhalinta maka laga rebo kuwa ka yimid Itixaadka iyo hunguriraaca ka soo xarooda naftood-hureyaasha ururka ONLF-ta oon odhan jirnay waa awliyadii gaaloobay. Dhalinyaradaa qasabka lagaga dhigay inay noqdan ciidanka liyuu-policeka niyad uma hayaan balse 80% naftooda ayay ku ilaalinayaan liyuupolice-nimada, raalina kama wada aha dhibaatada ay ku hayaan eheladooda.
Maamul xumada ciidanka liyuupoliceka dhexdiisa.
Gudaha cidanka liyuupolice waxaa ka jirta maamul xumo katiaamada masuuliyiinta sare oo aan lahayn khibrad ciidannimo iyo aqoonta maadiga ah iyo ilaalinta xuquuqda qofka iyo xuquuqda askarinimo ama macnaha xaqa askariga. Waa ciidan dhexdooda aan is-aaminsanayn oo lagu abuuray reer reer inay u kala socdaan oo maalinta ay ciidan soo laayaan reer meel daganaa ay kuwii kale soo laynayaan reerkoodii. Arintaasi waxay keentay inuu shacab badan ku dhamaado is-ximinta kooxaha iska soo horjeeda.
Dalacsiinta ayaa ku dhisan eex iyo ninba ninkiisa. Waa arimaha ay aad uga guuxi jireen ciidanka gar ahaan intii hore sidaas awgeed maadama aysan haysanin maamul cadaalad ah iyo hogaan cadaalad ah, sidoo kalena ay faraha kula jiraan dhigii umadooda, isku dhacna jiro oo maanta qaar ka mida lyuupolice togasho lagu sameeyey qaarna laba xidhxidhay waxaa jirta guux badan oo ka yeedhaya cidankan liyupolice oo ah in ay garan layihiin sababta ay shacabkooda u laynayaan ama ay iyagu u dhimanayaan oo marka ay ku dhintaan dagaalada ay la galaan ONLF-ta aan xataa loo sheegin eheladoodii ama aan si xushmad leh loo aasin.
Sababahan ayaa iyo qaar kaloo badan oo aanan halkan ku wada faahfaahin karin ayaa ugu muhiimsan sabata ay u goosanayaan liyuupolice-ku.
Qore Faysal C/wali.